लेकसाइड एफसीलाई नवौं विटी कपको उपाधि – Peacepokhara.com
पोखरा, १० पुस। लेकसाइड एफसीले पोखरामा जारी नवौं विटी कप सेभेन–ए–साइड फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि हात पारेको छ। बुद्धटोल युवा क्लब पोखराको आयोजनामा पुरानो टुँडिखेल मैदानमा बिहीबार भएको फाइनलमा एएमपिएम गौरीघाट एफसीलाई टाइब्रेकरमा ३–२ ले हराउँदै लेकसाइड एफसीले उपाधि हात पारेको हो।
निर्धारित समय गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि खेल टाइब्रेकरमा पुगेको थियो। टाइब्रेकरमा लेकसाइडका गोलकिपर विशाल श्रेष्ठले गौरीघाटका अनिल गुरुङको पहिलो प्रहार सेभ गरेका थिए भने म्यान अफ दी म्याच सुनिल विक र कालु थापाको प्रहार गोलमा परिणत भएको थियो। लेकसाइडको तर्फबाट भने रुपेश केसी, अनिल ओझा र विमल घर्तीमगरका तीनै प्रहार गोलमा परिणत भएको थियो।
लेकसाइडले उपाधिसँगै नगद नगद ७५ हजार पाँच सय ५५ शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त ग¥यो भने उपविजेतामा सीमित गौरीघाटले नगद ४५ हजार पाँच सय ५५ मा चित्त बुझायो। प्रतियोगितामा गौरीघाटका कालु थापा बेस्ट डिफेण्डर, गौरीघाटकै सुनिल विक बेस्ट मिडफिल्डर, लेकसाइडका विशाल श्रेष्ठ बेस्ट गोलकिपर तथा सर्वाधिक छ गोल गरेका लेकसाइडकै रुपेश केसी हाइस्कोरर घोषित भए। उनीहरू सबैले ट्रफी हात पारे भने यु–१७ नाउडाँडा एफसीले फेयर प्लयेको ट्रफी पायो। प्रतियोगितामा बेस्ट प्लयेरको उपाधि नेपाली राष्ट्रिय टीमका स्ट्राइकर एवं लेकसाइडका विमल घर्तीमगरले हात पारे।
प्रतियोगितामा विजेता तथा उपविजेता टीमलाई प्रमुख अतिथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी वसन्तकुमार लामा, पत्रकार राजबहादुर गुरुङ, ग्यास व्यवसायी सङ्घका उपाध्यक्ष बालकृष्ण कोइराला, वडा प्रहरी कार्यालय बगरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक अम्बरबहादुर थापा, क्षेत्रीय भलिबल सङ्घका उपाध्यक्ष शुभकन्या गुरुङ, जिल्ला भलिबल सङ्घका उपाध्यक्ष खगेन्द्र गौचन, इन्द्रेणी एकीकृत विकास केन्द्रका अध्यक्ष भानुभक्त अधिकारी, ज्ञानुबाबा आउमाविका संस्थापक कृष्णबहादुर गुरुङ, क्लबका अध्यक्ष अरुण गुरुङ, खेल संयोजक प्रदीपकुमार राई ‘दाह्रा सिंह’, बगर भाइखलकका कोषाध्यक्ष इश्वर गुरुङ, क्या. पूर्णबहादुर गुरुङ, राधा गुरुङ, विनिता गुरुङ, प्रेमबहादुर गुरुङलगायतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए। पुस २ गतेबाट सञ्चालित सो प्रतियोगितामा ३५ टीमको सहभागिता रहेको थियो।
दोस्रो अमन गुरुङ स्मृति सेभेन–ए–साइड फुटबल प्रतियोगितामा प्रिक्वाटरफाइनलका खेल सम्पन्न, आज शुक्रबार क्वाटरफाइननल खेल हुने पोखरा, १० पुस। पोखरा भ्याली स्पोर्टस् क्लब पोखरा–१०÷१५ रामबजारको आयोजना एवं इन्टेक ०६ ब्रिगेड अफ गोर्खाज, बेलायतको मुख्य प्रायोजनमा माछापोखरी खेलमैदान संगमटोलमा जारी दोस्रो अमन गुरुङ स्मृति सेभेन–ए–साइड फुटबल प्रतियोगिता–२०७१ अन्तर्गत बिहीबार प्रिक्वाटरफाइनलका खेल सम्पन्न भएका छन्।जसअनुसार क्वीन गोर्खा सिग्नल, एलजी एशोसिएसन, संगम एफसी ए, नयाँगाउँ युथ क्लब, एयरपोर्ट युथ क्लब, लेकसाइड एफसी र संगम एफसी बी क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्।
बिहीबार भएको पहिलो प्रिक्वाटरफाइनल खेलमा लेकसाइडले नयाँगल्ली एफसीलाई टाइब्रेकरमा ३–१ ले पराजित ग¥यो। लेकसाइडका हेमन्त थापामगर र नयाँगल्लीका विनोद गुरुङले एक–एक गोल गरेपछि निर्धारित समय एक–एक गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। दोस्रो खेलमा नयाँगाउँ युथ क्लबले आयोजक पोखरा भ्याली स्पोर्टस् क्लब बी लाई २–० ले हरायो। नयाँगाउँको लागि प्रदीप बानियाँ र राजकाजी गुरुङले एक–एक गोल गरेका थिए।
तेस्रो खेलमा क्वीन गोर्खा सिग्नलले युनिटी एफसीलाई २–१ ले पाखा लगायो। क्वीन गोर्खाका लागि विश्वास गुरुङ र निशान गुरुङले एक–एक गोल गरेका थिए भने युनिटीका अजित गुरुङले गरेको गोल सान्त्वनामा परिणत भयो।चौथो खेलमा एलजी एशोसिएसनले रिलिजन एफसीको चुनौती टाइब्रेकरमा ३–१ ले समाप्त पा¥यो। निर्धारित समयमा एलजीका अशोक गुरुङ र रिलिजनका विश्वास नेवारले एक–एक गोल गरेपछि खेल टाइब्रेकरमा पुगेको थियो।
पाँचौं खेलमा संगम युथ क्लब ए ले सत्य युवा क्लब बि–१३ लाई टाइब्रेकरमा ३–२ ले पराजित ग¥यो। निर्धारित समय गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो। छैटौं खेलमा संगम युथ क्लब बी ले पाटन युनाइटेडलाई २–० ले पराजित ग¥यो। संगम बी को लागि लावल गुरुङ र भिक्टोर अमोबीले एक–एक गोल गरेका थिए । सातौं खेलमा एयरपोर्ट युथ क्लबले काजीपोखरी युथ क्लबलाई १–० ले पराजित ग¥यो। एयरपोर्टको लागि रामु परियारले निर्णायक गोल गरेका थिए।
आठौं खेलमा आयोजक पोखरा भ्याली स्पोर्टस् क्लब ए ले एलजी एकतालाई २–० ले हरायो। पोखराभ्याली ए को तर्फबाट दुवै गोल विजय गुरुङले गरेका थिए। शुक्रबार क्वाटरफाइनलका खेल हुने क्लबका सदस्य विकास गुरुङले जानकारी दिए। पुस १२ गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा युकेको तीन टीमसहित २९ टीमको सहभागिता रहेको छ।
छ लाख ५० हजार खर्च हुने तथा आठ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएको प्रतियोगिताबाट बचत भएको रकमको ५० प्रतिशत अमन गुरुङ अक्षयकोषमा जम्मा गर्ने तथा ५० प्रतिशत रकम क्लब सञ्चालनमा खर्च गरिने छ। शुक्रबार बिहान ११ बजे टोल विकास संस्था समन्वय समिति वडा नं. १० र टोल विकास संस्था समन्वय समिति वडा नं. १५ लक्ष्मीमन्दिर आमा समूहबीच महिलाको मैत्रीपूर्ण खेल हुने क्लबका सचिव सम्मरबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए।
केन्याले नेपाललार्इ ५ विकेटले हरायो
नेपालले वर्ल्ड क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप खेल्न पाउने
peacepokhara 28 Jan 2015
पोखरामा अन्तराष्ट्रियस्तरको स्क्राबल प्रतियोगिता हुने